Akụkọ kacha ọhụrụ gbasara FCT Abuja si Nigeria & ụwa | TAA
Ndi ochichi delta kwadoro ugwo ego maka umuaka
A tụrụ mmadụ abụọ ikpe mkpọrọ afọ atọ maka ịgba akwụkwọ ọnwụ
E nyere ndị na-enye 416 aka na ISI na France
UBEC: Achọpụtaghị ụmụ akwụkwọ na-apụ apụ na-ezighị ezi
Harry Redknapp: Gareth Bale laghachi azụ na Tottenham ga-adị egwu
Sweden FA: Zlatan Ibrahimovic ga-egwu na Russia World ...
Henry Onyerou, onye Nigeria na-alaghachi na Anderlecht
Real Madrid na-enye nrọ egwu nke Bayern Munich nlekota ego
Home Tags FCT Abuja
FAAC weghaara N263.28 ijeri gọọmenti etiti na February - NBS
Ụlọọrụ National Bureau of Statistics (NBS), na-ekwu na Federal Government natara nchịkọta nke N263. Ejeri nde 28 site na NCCNUMX ijeri Federation Accounting Committee (FAAC) weghaara na atọ na atọ nke ọchịchị na February.
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị omekome 33, ndị na-apụnara mmadụ ihe, na ndị na-eme ihe ike na Bauchi
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Bauchi ekwuola na ndị omekome 33 maka mpụ ndị dịgasị iche gụnyere ịna mpi, ịkwakọrọ ihe ndị e ji ngwá agha, igbu ọchụ, gafee steeti n'oge ọtụtụ agha.
Ndị ezinụlọ Abdulrasheed Maina dọrọ EFCC n'ụlọikpe, kpughee 'cabal' na Nkume Aso
Ezinụlọ nke onye isi oche nke onyeisi ndị ọrụ nlekọta nke mmezi iwu nke ndị isi nke ọchịchị, Abdulrasheed Maina, kwere nkwa ịdọrọ Akaụntụ Mpụ na Ụba (EFCC) n'ụlọ ikpe maka ịchọta ụlọ isii a na-ekwu na ọ bụ Maina.
Delta State Gọọmenti kwadoro ịhapụ ego maka ịkwụ ụgwọ nke Ụlọ Akwụkwọ Enyemaka Mmasị nke 2016 / 2017, nke a na-amaghị dịka akwụkwọ ego, maka ụmụ akwụkwọ nke steeti si na ụlọ akwụkwọ ndị isi na mba.
E jikọtara Gareth Bale na nloghachi na Tottenham n'agbata enweghị mgbagwoju anya banyere ọdịnihu ya na Real Madrid, Harry Redknapp kwukwara na ọbịbịa Premier League ga-abụ "ihe dị egwu".
Onye ahia, Kingsley Osarogiagbon na otu nwanyị na-azụ ahịa, bụ Tina Edosa, bụ ndị a kpọpụtara n'ihu Thursday n'ihu Ụlọikpe Magistrate nke Ikeja na-akwụ ụgwọ NVNUMX nde na ịwa ụta nke akwụkwọ ọnwụ.
Ndi ochichi French achoputala ndi 416 ndi nyere ego nye ndi ala Islam State (IS), onye isi ikpe a na-aju anya nke France kwuru onwa Thursday, ka otutu ndi ozi zutere iji kwue etu esi ewepu ego nye ndi na-akwado ndi mmadu.
Onye odeakwụkwọ bụ Executive Secretary of the Universal Basic Education Commission (UBEC), Dr. Hammid Bobboyi, ekwuola na a na-eji 10.5 eme ihe na mgbasa ozi dị ka ọnụ ọgụgụ ụmụaka na-anọghị na Naijiria na-ezighị ezi.
Onye edemede a na-ede akwụkwọ bụ Chimamanda Ngozi Adichie ka a họọrọ site na Harvard College Class of 2018 iji zaa ndị agadi na-agụsị akwụkwọ dị ka akụkụ nke ememme ụbọchị ọmụmụ nke otu ụbọchị na May 23, ụbọchị ahụ tupu mmalite nke 367th Harvard.
Ngwapụta ihe onwunwe: Nleta Ulo na ezughị okè Victor Uwajeh
Seny Andy Uba, nke na-anọchite anya Anambra South Senatorial District, emebiela nhọpụta nke Victor Victor Uwajeh, nke Gọọmentị Fedịịlọn dị ka onye nyocha iji chọpụta ma weghachite ego.
Juventus 'Gianluigi Buffon' na-agba asịrị 'nke Medhi Benatia elu
Gianluigi Buffon sụgharịrị "ịgba asịrị ụgha" maka ịgbalị imebi Juventus n'agbata akụkọ banyere ịdapụ na onye otu ibe Medhi Benatia.
Ugbu a na-eweta nhazi nke ndị Minista 300, Ngalaba na Ụlọ Ọrụ (MDAs), Galaxy Backbone, na-etinye ọnọdụ n'ọnọdụ iji jikọta akụrụngwa nke onwe ya na ọrụ dijitalụ ya.